Soo dejisan Titanium Backup 7.2.1.2 – Vessoft
AndroidNidaamkaSoo celinta iyo soo celintaTitanium Backup
Bogga rasmiga ah: Titanium Backup
Titanium kaabta – software awood leh in ay gurmad xogta ah ee noocyada kala duwan. Kaabta Titanium u saamaxaaya in ay soo saarto ama soo celiyo files ilaaliyo iyo codsiyada nidaamka. Software abuuraa dhowr hayaan iyo iyaga sir ah si looga hortago khasaaro xog dheeraad ah. Kaabta Titanium u saamaxaaya in ay reserved hayaan si waafaqsan jadwalka go’an ama sameeyo habkan hab buuggan. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad eegto waxa ku jira fayl iyo aad u hesho macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan wax kasta oo files. Kaabta Titanium ayaa shaqadiisu tahay inuu suuqa kala iibsiga xogta fudud ka soo xusuusta gudaha ee qalabka la mid ah dibadeed.
Tirtirtaa ama dib u soo celineysa xogta
Wareejinta macluumaadka si ay u kaadhka xusuusta
Waxaa la dhisay-in file browser
Kaabta in hab toos ah
Soo dejisan Titanium Backup
Faallo ku saabsan Titanium Backup
Titanium Backup Xirfadaha la xiriira
DU Speed Booster – qayb weyn oo lagu kordhiyo siinta qalab ku habboon, badbaado iyo hawlgal dhakhso leh oo qalab ah. Software-ka waxaa ku jira aalado badan si loo gaaro waxqabadka ugu weyn ee suurogal ah.
Qalab ku haboon maamulka email ah. Software ayaa si toos ah go’aansan emails by muhiimadda ay leedahay oo kuu ogolaanaya in aad si deg deg ah ay tirtirto ama fariimaha archive.